Fijerena Laima, Laimas pulkstenis - Riga
Adiresy: Aspazijas bulvāris 20, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Letonia;
Misokatra: mihodina amin'ny famantaranandro.
Ao amin'ny tanàna tsirairay dia misy tsangambato sy rafitra miavaka, izay rakotra tantara sy fomban-drazana. Ao Riga, ireo no fijerin'i Laima, izay manamarika ny endrika amam-panahy tena izy. Izy ireo dia miorina eo afovoan-tanàna, noho izany ireo mpizahatany, mandehandeha eny amin'ny arabe an-dàlambe, mila manao sary mifanohitra amin'ny fiaviany.
Laima Clock tao Riga - tantara
Milaza ny tantara fa nanomboka nanisa ny vanim-potoana nanomboka ny taona 1904 ny tanan'i Laima tany Riga. Hatramin'izao fotoana izao, ny hetsika goavana dia ny fanombohana ny fiara voalohany. Izany dia nitarika ny fanatsarana ny fijanonan'ny fitateram-bahoaka, noho izany dia namorona trano fatoriana mahagaga ny gazetibok'i August Rheinberg.
Natao hazo izy ireo tamin'ny fomba mahazatra Soisa. Teo amin'ny lampivato voalohany no nisy azy ireo ary sambany vao nivoaka ny fiambenana. Tatỳ aoriana, ny fomba ofisialin'i Soisa dia tsy lamaody, ary nokarakarain'ny architect Baltic-alemà Arthur Medlinger ny planin'ilay trano. Ny tetikasa, izay novolavolainy, dia mahafinaritra be ny mpizaha tany.
Ny arofanina dia natao amin'ny fomba tsy araka ny tokony ho izy, noho izany dia mety ho mora simba amin'ny trano grika tranainy iray ny trano. Niaraka tamin'ny tranobe, ny bika aman'endriny dia nosoloina ihany koa ny ora izay niseho noho ny solombavambahoaka avy amin'ny blaogy Social-Democratic. Nanizingizina izy fa nisy andry vy tamin'ny rantsana efatra.
Tany am-piandohana, ny famantaranandro dia natao mba hahazoana antoka fa ny mpiasa dia tsy tara amin'ny orinasa. Saingy ny solombavambahoaka Veckalns dia nanazava fa ny asan'ny famantaranandro dia tsy mamela ny mpiasa handeha hiasa aloha kokoa. Noho io zotom-po io, ny famantaranandro dia nahazo ny anarany voalohany ho fanomezam-boninahitra an'ilay mpamorona.
Na izany aza, io anarana io dia naharitra hatramin'ny taona 1930. Efa tamin'ny taona 1936 no nanamboarana ilay tranokala miaraka amin'ny famantarana ny mpamokatra sôkôla malaza any Letonia - "Laima", ary nanomboka nantsoina ny famantaranandro taorian'ny famokarana. Ao amin'ny tsanganana eo amin'ny takelaka dia ny anaran'ny orinasa dia napetraka amin'ny lafiny efatra.
Niaraka tsikelikely, dia nanatona ny anaran'ny vokatra samihafan'ny orinasa. Ny famantaranandro dia namakivaky ny famerenana tamin'ny laoniny, tamin'ny 1999 dia navaozina tamin'ny endriky ny 1936. Nahazo hazavana vaovao izy ireo, nametraka ny anaran'ny vokatra, rafitra famantaranandro vaovao noforonina, nangonina tany Soisa.
Ny famantaranandro dia tsy manondro ny fotoana mety ihany, fa mampahatsiahy anao koa fa mila mividy ilay "Laima" sôkôla malaza, izay tena mirehareha amin'i Letonia. Azonao atao ny manendry daty na fivoriana iray mifanaraka amin'ny fomban-drazana Riga eo ambanin'ny famantaranandro.
Ny Laima Clock dia miorina eo an- dalan'ny tanàn-dehibe Brivibas , eo amin'ny sisin-tanin'ny Old and New Town. Tsy lavitra azy ireo no misy toerana hafa ao Riga, noho izany, tonga any amin'ny Tilikambo Mahavariana , afaka mahita ny zavatra tadiavina avy hatrany ianao.
Manao ahoana ny fitafiana amin'ny fahavaratra?
Famantarana ny faran'izao tontolo izao
Antonovka - tsara sy ratsy
Akanjo mainty fohy
Irina Sheik tsy misy fananganana
Plastika ceramic floor
Ahoana ny fandaminana ny garderie?
Fihetseham-pitiavana: tanora 20, izay mila mangataka famindram-po!
10 ny endriky ny fihetsika tsy maotina indrindra amin'ny lamaody maoderina
Mpilalao horonantsarin'i Hollywood te-hilalao ny lehiben'ny proletariat manerantany!
Tena very maina ny Britney Spears: lozam-pifamoivoizana tsy misy vagao
Lina Dunam nanohitra ny fanilikilihana ny lohahevitry ny fahasalaman'ny vehivavy!
Fotoam-bavaka mariazy amin'ny lohataona
Fitsaboana tratra - antony, fitsaboana